Birta birta labajibbaarane F-36-1
Cabbirka: L590 * W410 * H200 / 400mm 1. Xarig bir-jabsan, ku dabool caag ABS 2. cag oo garka garka ka hortagga
Joodariga isku-dhafan ee raaxada leh ee F-36-3
Saxarada F-36-3 muuqaalka ugu weyn: 1. Dhererka is beddalaya ee guga gaaska laga soo bilaabo 480-620mm 2. Saldhigga loo yaqaan 'chromed base', 5 laamood oo leh xargaha; 3. Kursigu waa Dia.320mm oo leh barkimooyin sare 4.kag hoos u dhig dhismaha
Shaashadda birta birta ah F-35
Cabbir: 2400mm (L) * 1680mm (H) Muuqaalka ugu weyn: 1. Xargaha birta oo birta ah, oo leh daahyada dharka lagu dhaqi karo.
Furaashka sariirta xoolaha-H-2
Cabbirka: L1930mm × W890mm × H80mm Sifooyinka ugu muhiimsan: 1. Isbuunyada tayada sare leh ee cufnaanta waa 35KGS / M3 iyo maro biyo aan biyo-celin ah, oo la dhaqi karo oo aan dab-damis lahayn. 2. leh xaashiyaha
Joodariyaal isku dhafan oo raaxo leh H-13
H-13 Daboolida maroojiska: PU biyuhu aan la celin karin iyo sheyga neefsashada
Kor u qaadista bukaanka guur-guura ee korantada
Codsiyada DE-1C1 ： ○ Alaabadan ayaa lagu dabaqi karaa bukaanka sariirta jiifka ah ee mudada dheer, iyo bukaanada ay dhibaatadu ka soo gaarto dhibaatada dhaqdhaqaaqa ama qaliinka kadib qalliinka. Waxaa loo adeegsan karaa iyadoo la kaashanayo daryeelayaasha daryeelka cisbitaalada, xarumaha kalkaalinta ama guriga. Daryeelayaashu waxay kor u qaadi karaan ama dhaqaajin karaan bukaanka qaliin kaliya, iyo naqshada badbaadinta shaqaalaha waxay ka fogaan kartaa dhaawaca dambe ee bukaanka ee ay keenaan xoog dar dar daryeele. Tilmaamaha: frame Qaabka ugu weyn wuxuu ka samaysan yahay tuubbo bir adag oo bir leh oo budo ah ...